ဒေါ်လာ ၂သန်းတန် ဘရာစီယာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ဒေါ်လာ ၂သန်းတန် ဘရာစီယာ
Posted by နွယ်ပင် on Nov 15, 2010 in Entertainment | 21 comments
ဒီလ အောက်တိုဘာ ၂၀-နေ့က New York မှာ Victoria’s Secret ဖက်ရှင်က ဒီနှစ်ရဲ့ ဟောလီးဒေးဖက်ရှင် အဖြစ် မော်ဒယ် အန်ဒရီယာနာ လီမာ Andriana Lima က ဒေါ်လာနှစ်သန်းတန် ဘရာစီယာကို ပထမဆုံးဝတ်ပြပြီး ပရိသတ်တွေရှေ့မှောက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီတန်ဖိုးကြီးပြီး လက်ရာမြောက်လှတဲ့ ဘရာစီယာရဲ့ ဒီဇိုင်းကို Damiani ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်မျက်ရတနာပေါင်း ၃၀၀၀-ကျော်နဲ့ စီချယ်ထားပါတယ်။ စိန် ၆၀-ကာရက်၊ နီလာ ၈၂-ကာရက် နဲ့ ဥသဖယားတွေနဲ့ စီချယ်ထားပါတယ်။ ရွှေဖြူ ၁၈-ကာရက်နဲ့ ကွပ်ထားပါတယ်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံသူလေး လီမာကတော့ Victoria’s Secret ရဲ့ ပင်တိုင်မော်ဒယ်တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အပြာရောင်ခါးရှည် အင်္ကျီနဲ့ အတူ စိန်လည်ဆွဲတကုံးကို
လီမာဟာ ၂၀၀၈ တုန်းကလည်း ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဘရာဇီယာကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဘရာစီယာရဲ့တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ FutureDream မှဖော်ပြပါသည် ။
“ကျမကိုယ်ကျမ ဒေါ်လာနှစ်သန်းလောက် တန်ဖိုးမြှင့်သွားသလို ခံစားရပါတယ်။ ကျမကိုယ်ကျမ သိပ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒီဘရာစီယာက သိပ်ကိုလှပပါတယ်။ ၁၄၂-ကာရက်တောင် ရှိတာလေ။” *** အဲဒီ စကားလေး သဘောကျတယ်။ အဲဒီဟာလေး ချွှတ်ယူထားလိုက်ရင် သူဘယ်လောက် တန်တော့မလဲ.. တပြားမှ တန်မှာတောင် မဟုတ်တော့ဘူး။ ဂွတီးဂွကျ တွေးမိတာပါ။
ဆူးရဲ့ အတွေးကတော့ လူတယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက တခြားလူတွေ အတွက် ဘာတွေ ဘယ်လောက် အကျိုးရှိသလဲ အဲဒီ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အပေါ် တန်ဖိုးဖြတ်ရင် လူတယောက်က တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင် တန်တယ် မတန်ဘူး ဖြစ်လာမယ် ထင်တယ်။
လူတော်– သူအတွက်ဘဲ အကျိုးရှိနေမယ် အများ အကျိုးမရှိ ** ဘယ်လောက် တန်မလဲ
လူတော် မဟုတ်– သူများအတွက် အကျိုရှိ သူ့အတွက် အကျိုးမရှိ ** ဘယ်လောက် တန်မလဲ
လူတော် — သူ့အတွက် အကျိုးရှိ သူများအတွက် အကျိုးရှိ ** ဘယ်လောက် တန်မလဲ
ပုခက်လွဲသော လက်သည် ကမ္ဘာကို စိုးမိုးမဲ့ လက် ** အဲဒီ စကားစု ** ပုခက်လွဲ ဆိုတော့ မိခင် ကို ရည်ညွန်းသည် ဟု ယူဆသည်။ မိခင်သည် သားသမီး အပေါ်တွင် အစဉ် မပျက် စီးဆင်းနေသော မေတ္တာရေဖြင့် အေးအေးမြမြ ချစ်ခင်တတ်၏။
မိခင်နှင့် တူသော (မိခင်က သားကို ချစ်သလို) ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြင့် အားလုံးကို တူညီ စိတ်ထား ချစ်မြတ်နိုးပေးတဲ့ သူဆိုရင် ပုခက်လွဲသော လက်ဖြစ်မလား။
ကမ္ဘာကို စိုးမိုးတယ် ဆိုတော့.. ဆက်လက် အတွေးနယ်ချဲ့ရင်..
အားလုံးအပေါ် အကြင်နာ မေတ္တာ ထားနိုင်သူသည်။ တကယ် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ လူဖြစ်လေမလား။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်မယ် ယူဆပါသည်။
မိုက်လိုက်လေ မိဆူးရယ်။ သူသာအဲဒီဘရာကိုချွတ်လိုက်ရင် သန်း၂၀လည်းဟုတ် သန်း၃၀လည်းဟုတ်။ မယုံရင်မဲဆန္ဒအဆုံးအဖြတ်ခံကြည့်လိုက်ပါလား။ သန်း၂၀၀လို့တောင် ပြောမဲ့သူတွေရှားမှားမဟုတ်ဘူး။ ဦးကြောင်ကြီးကတော့ သန်းနှစ်ထောင် ပေးမယ်။
ကိုကြောင်ကြီးဆိုတော့ သန်းပေါမှာပေါ့ ဒါကြောင့် နှစ်ထောင်တောင်ပေးမယ်ပေါ့
ဆူးပြောသလိုပါပဲ … လူတစ်ယောက်က ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိတာတွေပဲ 0တ်ထား0တ်ထား သူရဲ့ တန်ဖိုးတွေက တက်မလာနိုင်ပါဘူး .. သူလုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု ၊ သူဆောင်ရွက်လိုက်လိုက်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခု ၊ သူထားရှိလိုက်တဲ့ စိတ်ထားလေး တစ်ခုက လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုး ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်ထင်တယ် ။ဒါတောင် အတိအကျကြီး ဆုံးဖြတ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော် . တန်ဖိုးဆိုတာက ဘေးနားက တန်ဖိုးထားသတ်မှတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့ အများရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အပေါ်မှာကွဲပြားသွားမယ်ထင်ပါတယ် .
် မော်ဒယ် အန်ဒရီယာနာ လီမာနဲ့ဒေါ်လာ ၂သန်းတန် ဘရာစီယာ တခုခုပေးမယ်ဆိုဘာကိုယူမလဲ ဘော်ဒါတို့…….
ဒီ ဘရာစီယာကလေ တော်တော်လေးမှာပဲနော်……..။ကျောက်တွေအဲ့လောက်များတာ…….။ဒါပေမဲ့ သူဝတ်ထားတာလေးကတော့ လှတယ်နော်။အဲ့ဒါကို ဘယ်လို Idea နဲ့များ လုပ်လိုက်ပါလိမ့်ဗျာ……..။
@tunaung > > အကိုမေးတာလေးကို ဖြေကြည့်ပါ့မယ်နော်။မော်ဒယ် အန်ဒရီယာနာ လီမာ……ကိုယူဖို့များပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သူ့ကိုယူလိုက်ရင် ဘရာစီယာကိုပဲ တပြိုင်ထဲ မဲပေါက်မှာ မို့လို့ပါ။ ဟီး ဟိး ……….
ur ansure was grate I love u n I gived u A right.
အော် ဘရာ ထက် .. လူ ပုံ လယ် မှာ ပိုက် ဆံ ရှာ တဲ. သူ ကို ချီး ကျူး ရ မ လာ ဘဲ ဟီး ဟီး ..
တခါတေလကြရင် ပေးတဲ့ လူနဲ့ ယူသူကြားမှာ အမြင်တွေအမျိုးမျိုးမြင်အောင်ကြည့်ကြတာ လူသားတွေရဲ့အလုပ်ပါမီဒီယာကပေးတဲ့ သတင်းပေါ် comment တွေ့ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ကဒီလိုမြင်မိတယ် ဘရာစီယာတော့ဟုတ်ပါတယ် ဒါကိုစိန်တွေနဲ့ လုပ်ထားတော့ အဖိုးတန်ပြီးသား ကဲထားတော့ အဲဒီအ၇ာဝတ္ထုကြီးကိုဖယ်လိုက်ရင်လဲ ဒီအမျိုးသမီးက တန်ဖိုးရှိပြီးသားဘဲလေ တန်ဖိုးရှိအောင်တန်ဖိုးထားစဉ်းစားရင် တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာ အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ ရင်သားဟာ အနာဂဏ် အတွက် ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းနှစ်သွယ်ပေးနှိူင်တဲ့ကလေးတွေအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံးလေ ဘုရားဟောထားတာကြည့်လေ နို့တလုံးဖိုးတဲ့နည်းတဲ့ တန်ဖိုးလား အရာအရာတိုင်းမှာ တန်ဖိုးရှိပြီးသားပါ တန်ဖိုးထားသတ်မှတ် စံချိန်ထားတဲ့ လူတွေအပေါ်မှာဘဲ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေတယ်…..။
အသက် ၂၁နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ဘရာဇီးမိုဒယ် Andriana Lima ဟာ ..၂သန်းကို တနှစ်နဲ့အေးဆေးရှာလို့ရပါတယ်..။
တချိန်ချိန်တယောက်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ရင် … သန်းရာဂဏန်း အေးဆေးရှိတဲ့သူနဲ့ပဲ… လက်ထပ်ဖြစ်မှာပေါ့..။
သူ့တကိုယ်လုံးက … ငွေထုတ်စက်ပဲ..။ သူ့အလှကငွေထုတ်စက်ပဲ..။
မိန်းမတို့ ဥစ္စာသည် အဆင်းတဲ့.. ဆိုရိုးရှိတာကိုး..။
အင်း… သန်း ၃-၄ရာ သေချာပေါက်တန်တယ်ထင်ပါကြောင်း..။
ဦးလေး ခိုင်ပြောတော့လည်း တန်တာပေါ့နော်.. သူ ကိုယ်တိုင် အတွက် သူက တန်မှာပေါ့။
ဆူး တို့လို ရွာသူတွေ အတွက်ကတော့ ဘာမှ တန်ဘူး.. ဆူး တို့ ရွာအတွက် ဘာမှ အကျိုးတစုံ တရာ မပြုဘူးလို့.. အဲလို ပြောရမလား.. ရွာထဲက ကလေးတွေ ထမင်း တလုပ် တဆုပ် ဝေငှ ကျွှေးတဲ့ လူကို ဆူးတို့ တန်ဖိုးထားတယ်။ တန်ကြေး နားမလည်တဲ့ ခေးမလေးလိုဘဲ သဘောထားချင် ထားပေါ့လေ.. လူတိုင်းမှာတော့ မတူညီတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိတော့.. ကြိုက်နှစ်သက်သလို သဘောထားကွဲလွဲနိုင်တာပေါ့။
သူများတွေများ 21 နှစ်ပဲရှိသေးတယ် တစ်နှစ်ကို2သန်းလောက်ကတော့ အေးဆေးပဲတဲ့ .. တို့များ တစ်လ2သိန်းရဖို့တောင် မနည်းကြိုးစားနေရတုန်း။
ကုသိုလ်ကံများ ကွာလိုက်တာ ။
Model အလုပ်ကိုက ကိုယ်ဟန်ပြဖို့ပဲလေ… သူလည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်တာပါ… အခုဟာက ဘရာစီယာပြပွဲမို့လို့ ပွဲနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ၀တ်လာတာ နေမှာပေါ့ဗျာ… သူ့အလုပ်သူလုပ်တာပဲလေ… Model အလုပ်ဆိုတာလဲ လူတိုင်း လုပ်နိုင်တာမှ မဟုတ်တာ… ကိုယ်က လုပ်ချင်တာတောင် ကိုယ့်ကို အလုပ်လာပေးမယ့်လူက ရှိဦးမှ
ဗစ်တိုးရီးယား စိကရက် ..ဘယ်တော့မှမ၀တ်ကြနဲ့… ။ မယုံ၇င်..အောက်ကသတင်းကြည့်..။
ကိုခိုင်က အခုစိတ်တိုအောင် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆွပေးတာပဲ ဒီအကြောင်းကို Forwarwd မေးလ်တွေက ရတုန်းက တစ်ခါဒေါသတွေ ထွက်ခဲ့ဘူးပြီ .. အခုတော့ ဒုတိယ အကြီမ်ပေါ့ ဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ် ဘယ်လိုမှ ဒေါသမဖြစ်ပဲ မနေနိုင်အောင်ပါပဲ …
ကျနော်ကတော့ ဒေါသလည်းထွက် ကြည့်လို့လည်းကောင်းလို့ မြန်မြန်ပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီရေကူးဝတ်စုံကိစ္စတုန်းက သူတို့တောင်းပန်လိုက်ရတယ်လေ။ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ ကြောင်ကြီးတို့ ဆဲစာတွေပို့ခဲ့တာပေါ့။
တော်တော်ကြောင်တဲ့လူတွေပဲ တန်ဆာမဆင်သင့်တဲ့အရာကို အရေးလုပ်ပြီးတန်ဆာဆင်ပြသတယ် ။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှူအရတော့ ဒီလိုဖက်ရှင်မျိုးက လက်ခံလို့ရပေမဲ့ ဒီမှာ နှစ်ထောင်တန် ဘရာတောင်ဝတ်ပြရဲတဲ့လူမရှိဘူး (အမျိုးကောင်းသမီးများကို ဆိုလိုပါတယ်… ) KTV , club က မြန်မာမလေးတွေ ကင်မရာရှေ့မှာ ဟိုချွတ်ဒီချွတ်ကိုမြင်ခဲ့ဖူးလို့ပါ ။
ထက်ထက်မိုးဦးပြောသလို ပိုက်ဆံများရှိလို့ကတော့လေ တစ်ကိုယ်လုံးကို စိန်စီထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်များရောက်လာတော့မလားလို့ ။
မိန်းကလေးက ပိုလှပါတယ် သူ့အလှကသာ အလှစစ်ပါ
ဒေါ်လာ ၂ သန်းကို အရေးမကြီးတဲ့ဘရာလို အောက်ခံအ၀တ်အစား မျိုးမှာတောင်သုံးနိင်လို. ဒါနအကျိုးကြီးတာကိုလေးစားပါတရ်။ ဥာဏ်တော့မရှိကြဘူး။ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ဒါနမျိုး။ အလကားအခွံသပ်သပ်။ ဒီကြားထဲ ၂ သန်းတန်ဘရာဝတ်ရလို. တန်ဖိုးမြင့်သွားတရ်လို. ထင်လိုက်သေးတရ်။ လုံးဝသွားပီ။ ၂ ကျပ်ဖိုးလောက်တောင် အသိမရှိဘူး။ တောင်းမှာအကွပ် လူမှာအ၀တ် ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ. တန်ဖိုးအစစ်က အ၀တ်အစားကောင်းမှ မဟုတ်တာ။ လူတိုင်းကို အဓိက သာမည ခွဲခြားတတ်ပီး က္ကဒြေ္ဒရှိစေချင်ပါတရ်။